Sida loo badalo waqtiga shaashadu qaadato si loo demiyo Android | Androidsis
Sida loo beddelo waqtiga ay ku qaadato shaashadda ku taal Android inuu damiyo
Marka dhowr ilbiriqsi dhaafto annaga oo aan isticmaalin taleefankayaga Android, isla shaashadda ayaa dansan telefoonkiina wuu xidhan yahay markale. Tani waa wax iska caadi ah, in kastoo ay jiraan waqtiyo ay qaadaneyso waqti u muuqda inaysan ku filnayn, maxaa yeelay waxaan ka tagnay taleefanka in yar oo waxaan ku qasbanahay inaan markale furno. Ama waxay umuuqataa inay aad noogu badan tahay.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaan ku habeyn karnaa taleefankeena Android waqtiga aan rabno inaan dhaafno ilaa shaashadda ay ka dansan tahay. Sidan oo kale, waqtigan ayaa si fiican loogu hagaajiyay isticmaalka aan ka sameysanno qalabka. Waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka taas looga dhigayo qalabka.
Marka ugu horeysa waa inaan sameynaa fur dejinta taleefannadeena Android. Waxay kuxirantahay taleefoonka, nooca nidaamka iyo lakabka, talaabooyinku way kala duwanaan karaan ama magaca qaybaha, laakiin badanaa way isku mid yihiin xaalad kastoo jirta. Goobahan gudahood waa inaan galno qaybta shaashadda.
Qeybtaan waxaan ka helnay ikhtiyaar taas oo ah sug waqtiga si aad u joojiso shaashadda ama waqtiga hurdada, magaca wuu ku kala duwanaan karaa. Waa inaan markaa galno, halkaas oo aan ka helayno fursado kala duwan oo aan ka kala dooran karno.
Android waxay noo ogolaaneysaa inaan doorano inta jeer ee aan rabno inaan dhaafno ilaa shaashadda qalabka ay mar kale damiso. Waa inaad kala doorataa mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka aan ku hayno qaybtaan, sidaa darteed kani waa waqtiga ay tahay inuu dhaafo illaa shaashadda la yiraahdo la xiro.
Sida loo demiyo shaashadda taleefanka gacanta ee casriga ah iyadoo la adeegsanayo dareeraha sawirka faraha
Waxaan dooran waqtiga iyo waxaan siinaa inay aqbalaan. Tallaabooyinkan hadda waxaan uga tagi karnaa dejimaha ku jira Android, maxaa yeelay isbeddelka horay ayaa loo sameeyay. Aakhiro waqtiga aan dooranay waa inuu dhaafaa ilaa shaashadda taleefanka la daminayo. Marka waxaan u isticmaali karnaa taleefanka qaab ka fiican kiiskeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo beddelo waqtiga ay ku qaadato shaashadda ku taal Android inuu damiyo
5 talo bixin oo ka socota Google si loo hagaajiyo calaamadaha WiFi ee guriga